यौन आनन्द प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ? | Radio Chitwan 94.6 MHz
Posted on April 21, 2015 by Sanjay Chaudhary in यौन संसार //0Comments
चरमसुखको चरणमा मांसपेशीहरूमा तनाव आउँछ र त्यो आफैं खुम्चने तथा खुल्ने हुन्छ । श्वास(प्रश्वास तथा मुटुको गति बढेर दोब्बर हुन्छ र रक्तचाप पनि बढ्छ । महिलाहरूमा पाठेघर तथा योनिको बाहिरी भाग एवं शरीरको तल्लो भागका मांशपेशीहरू खुम्चने तथा फुक्ने हुन्छ । पूर्ण चरमसुख पाउँदा यस्तो मांसपेशी खुम्चने फुक्ने क्रम १० देखि १५ पटकसम्म हुन्छ । यतिबेला जुन सुखानुभूति हुन्छ हामी त्यसलाई चरमसुख वा चरम आनन्द भन्छौं । पुरुषहरूको हकमा भने यो केही फरक हुन्छ । सुरुमा आन्तरिक अङ्गहरू खुम्चने फुक्ने क्रम चल्छ र वीर्यलाई मूत्रनलीमा धकेल्छ । यो अवस्थामा स्खलन रोकिन नसक्ने भएकाले यसलाई प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न पनि भनिन्छ । त्यसपछि मूत्रनली, लिङ्ग तथा पौरुष ग्रन्थिको खुम्चने फुक्ने क्रम सुरु हुन्छ र वीर्य पनि बाहिर निस्कन्छ ।
आधारभूत रूपमा महिला तथा पुरुषमा यौन प्रतिक्रिया चक्र उस्तै हुन्छ तर पनि केही कुरामा भने भिन्नता देख्न सकिन्छ । यदि चरमसुखको चरण पछि पनि यौन स्टिमुलेसन निरन्तर रूपमा भैरह्यो भने कतिपय महिलाले एकपल्टभन्दा बढी चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन् । पुरुषहरूमा भने त्यस्तो हुँदैन । पुरुषहरू चरमसुख पाएर पुरानै अवस्था फकिर्कपछि केही समयका लागि यौन रूपमा उत्तेजित गर्न नसकिने अवस्थामा जान्छन् ।
तपाईं र तपाईंको केटासाथीको उमेर र तपाईले यौनसम्पर्क राख्दाको परिस्थिती कस्तो थियो, थाहा भएन । यौनसम्पर्कबाट आनन्द लिन व्यक्ति शारीरिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ । विशेष गरेर विवाहपूर्व गरिने यौनसम्पर्क लुकाएर गरिनुपर्ने भएकाले धेरै हदसम्म तनावयुक्त वातावरणमा हतारका साथ भएको हुन्छ । सहमतिमै भएका यौनसम्पर्क पनि समस्याविहीन हुने होइनन् । त्यसैले जोसमा होस गुमाउनु हुँदैन अन्यथा अनिच्छित गर्भ वा यौनरोगको समस्या भोग्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ । तपार्इंहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको तथा कति गहिरो छ ? यदि सम्बन्ध त्यति गहिरो छैन भने यौनसम्पर्क राख्ने कार्य ठीक हो वा होइन भन्ने प्रश्न मनमा भएको अवस्थामा तपाईं यौनसम्पर्कका लागि मानसिक रूपमा पूर्ण तयार भएको मानिंदैन । यस्ता कतिपय कारणले विवाहपूर्व यौनसम्पर्क राख्ने कुरा ठीक मानिँदैन ।
पुरुष तथा महिलाको यौन प्रतिक्रिया चक्रमा हुने भिन्नता तथा अन्य कारणले हरेक यौनसम्पर्कमा यो सम्भव हुन सजिलो छैन । कतिपय स्थितिमा पुरुषको र कतिपय स्थितिमा महिलाको यौनसुख प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन सके महिलालाई यौन सुख प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । यौन प्रतिक्रिया चक्रमा मात्र होइन, महिलाको यौनाङ्गको फरकपनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । तपाईंलाई थाहै होला, महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अङ्ग ‘भगांकुर’ बाहिरतिर नै हुन्छ । सामान्यतस् पुरुष माथि र महिला तल रहेर गरिने यौनसम्पर्कले महिलाको भगांकुरलाई घर्षण गर्दैन । महिला माथितिर रहेको अवस्थामा महिलाले आफूले चाहेजस्तो कटी प्रदेश चलाउन सक्छिन्, जसले यौनसुख प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । तपाईंलाई थाहै होला, भगांकुरलाई हात वा औंलाले नै चलाएर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ । यौन प्रसाधन जस्तै भाइब्रेटरको प्रयोग पनि अर्को उपाय हो । तपाईंले हस्तमैथुन गरेर यौन आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन, जानकारी दिनुभएको भए जवाफ दिन सजिलो हुने थियो ।